Global Voices teny Malagasy · 13 Jona 2019
Tantara tamin'ny 13 Jona 2019
Hafanam-po13 Jona 2019
Dika13 Jona 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2015) Arahaba daholo! Ialana tsiny ny fahataràn'ny taratasin-pifandraisana taminì'ity herinandro ity. Dia tonga eto amin'ity Talata mahafinaritra ity isika izao hiresahana aminareo ny momba ny … Fototry ny teny Efa mba nanontany tena angamba ianareo ny amin'izay mampiavaka ny olombelona amin'ny biby hafa? Noraisin'i...
Eoropa Afovoany & Atsinanana13 Jona 2019
Antsafa13 Jona 2019
Mitrandraka ny fomba fampiasana finday mba hitantarana ny hetsika sy hanampy amin'ny fandraketana ireo angano sy tantara zarain'ireo mpanakanto eo an-toerana amin'ny fitenin-drazana Shipibo sy nadika tamin'ny fiteny hafa ireo mpitati-vaovao nofanina vao haingana avy ao amin'ny Fikambanan'ny Tanora Tompotany ao amin'ny Faritra Ucayali (OJIRU).
Eo andrefan'i Côte d'Ivoire ihany no misy an'i Liberia, izay manana mponina eo amin'ny 3,5 tapitrisa eo ho eo. Nonenan'ireo andevo afaka avy any Etazonia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19, tafiditra tao anatin'ny ady an-trano sy korontana naharitra 14 taona i Liberia izay nifarana tamin'ny faran'ny taona 2003 tamin'ny fahatongavan'ny CEDEAO sy...